Applied Professional level Microsoft Excel လက်တွေ့ အသုံးချပရိုအဆင့်သင်တန်း – Than Hlaing , Accounting & Finance Professionals
ယခင်က Microsoft Excel Specialist , Microsoft Excel For The Working Professionals သင်တန်းများကို အထူးပြုသင်ကြားရာမှ
ယခုအောက်တိုဘာလမှစတင်ကာ အခြေခံအဆင့်သင်တန်းများကိုမဖွင့်လှစ်တော့ပဲ လုံး၀ဥဿုံ အလုပ်လုပ်နေကြသော လုပ်သက် အနည်းဆုံး ၂ နှစ်အထက် စာရင်းကိုင်များ အချက်အလက်ပြုစုကာလေ့လာဆန်းစစ်ရသူများ နေ့စဉ်အချက်အလက်သန်းချီကိုင်တွယ်နေရပြီး လုပ်ငန်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုအတွက်အထောက်အကူပြုအစီရံခံစာများ ဂရပ်များ ရေးဆွဲကာဝေဖန်သုံးသပ်အကြံပြုရသော လုပ်ငန်းခွင်မာန်နေဂျာများအားသာမာန်သမားရိုးကျသုံးနေကျပုံစံ အလုပ်လုပ်နေကျပုံစံများမှခွဲထွက်ကာ
ပိုမိုသေသပ်စမတ်ကျစွာအချိန်သက်သာစွာဖြင့် Reporting & analysis ပိုင်းအတွက် ယခင်ကကဲ့သို့အချိန်များစွာမပေးရပဲ တိကျမြန်ဆန်သေသပ်စွာဖြင့် လွယ်ကူစွာလုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး မည်သည့်လုပ်ငန်းခွင်နယ်ပယ်တွင်မဆို အသုံးတည့်သော မသိမဖြစ်အခြေခံစနစ်များ အခြေခံစနစ်များကိုအဆင့်မြင့်ပေါင်းစပ်သုံးလျက် အဆင့်မြင့်ပုံစံချအလုပ်လုပ်သောမော်ဒယ်လ်စနစ်များ ဒေတာပမာဏမည်မျှကြီးမားသည်ဖြစ်စေ ပြုလွယ်ပြင်လွယ်ပြီး မောက်စ်ဖျားမှာအချက်အလက်အားလုံးကိုသိမ်းပိုက်လျက် ဖျတ်ကနဲဖျတ်ကနဲ ဆွဲထုတ်ဆွဲစိ ဖြန့်ထုတ် ဖြန့်ခွဲ စုစည်း စုစီ စုပေါင်း စစ်ထုတ်နည်းစနစ်များ ဒေတာကို အလွယ်တခုဖေါက်ခွဲကြည့်နိုင်သောစနစ်များ စသဖြင့် ဘဏ္ဍာရေးပရော်ဖက်ရှင်နယ်တိုင်းအတွက် မသိမဖြစ်မရှိမဖြစ် အဆင့်မြင့်နည်းစစနစ်များကိုသာစုစည်းကာလက်တွေ့အသုံးချပရော်ဖက်ရှင်နယ်အိပ်က်ဇဲလ် Applied Professional Level Excel သင်တန်းကို အသွင်သစ်နည်းသစ်စနစ်သစ်များစွာဖြည့်စွက်ပေါင်းစည်းကာသင်ကြားခဲ့ပါပြီ။
အခြေခံအဆင့်သာသုံးစွဲခဲ့သည်ဖြစ်စေ နှစ်များစွာ သုံးစွဲဖူးသူအတွက်ဖြစ်စေ ပရိုအဆင့်ကျွမ်းကျင်မှုအတွက် မသိအဖြစ်အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် မပါလျင်မပြီး မသိလျင်အလုပ်ခွင်ကိုနှောင့်ယှက်ဒုက္ခပေးနိုင်သည်ဖြစ်ရာ အောက်ခြေမလွတ်စေရန် အတွက်အခြေခံအုတ်မြစ် ဖော်မြူလာဖန်ရှင်များ လမ်းတိုရှော့ကပ်တ်များ မှစတင်ကာ ပရိုတိုင်းမသုံးမဖြစ် အဆင့်မြင့် ဖန်ရှင်အားလုံးကို စနစ်တကျစုစည်းသင်ကြားထားပါသည်။ ယခင်နှင့်မတူသော Excel user အဖြစ်သင်တန်းချိန် ၁၂ နာရီ တနင်္ဂနွေသုံးပါတ်ပြီးလျင်အပိုင်းတပိုင်းပြီးပါပြီ။
အပိုင်း(၁)တွင်လေ့လာခဲ့သောနည်းစနစ်များမှာ လုပ်ငန်းခွင်အတွက် လိုအပ်သောလက်နက်ကရိယာကိုဖြည့်ဆည်းပြီး နမူနာပုံစံများစွာဖြင့်သုံးပြခဲ့သည်ဖြစ်သော်လည်း ထိုနည်းစနစ်များကိုပေါင်းစပ်လျက် ပိုမိုအဆင့်မြင့်သော မော်ဒယ်များကို ဘဏ္ဍာရေးစာရင်းကိုင်လောကတွင် လုပ်ငန်းတိုင်းနေရာတိုင်းပြေးမလွတ်သော အဓိကပုံစံသုံးခုဖြစ်သည့် ၀င်ငွေအရှုံးအမြတ်ရှင်းတမ်း ဘဏ္ဍာရေးအခြေပြရှင်းတမ်း ငွေသားစီး၀င်စီးထွက်မှုရှင်းတမ်း သုံးမျိုးကို အစမ်းရှင်းတမ်းမှဖြစ်စေ မူရင်းထည့်သွင်းထားသောဂျာနယ်လ်ဒေတာများမှဖြစ်စေ မော်ဒယ်လ်များဖြင့် အလွယ်တကူပုံစံချအစီရင်ခံစာထုတ်နိုင်ပုံ လေ့လာဆန်းစစ်မှုအတွက်အရံသင့်ဖြစ်နိုင်ပုံတို့ကို တနင်္ဂနွေသုံးပါတ် တပါတ် ၄ နာရီ စုစုပေါင်း ၁၂ နာရီသင်ကြားပါသည်။ အပိုင်း(၂) မှာ အပိုင်း(၁)တွင်သိရှိခဲ့သော Tools များကိုသုံးလျက် တစ်ဦးစီ၏တီထွင်စိတ်ကူးကိုသုံးကာ ဆော့ဖ်ဝဲကိုမည်သို့ခိုင်းစေနိုင်ပုံကို စနစ်တကျသင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဘဏ္ဍာရေးမဟုတ်သောအခြားဌာနာ၀န်ထန်းများအတွက်အပိုင်း(၂)မှာမလိုအပ်ပါ။ စာရင်းကိုင်များ အထူးသဖြင့် စာရင်းကိုင်ချုပ်များ ဘဏ္ဍာရေးမာန်နေဂျာများ စီနီယာစာရင်းကိုင်များအတွက်မူအလွန်တန်ဖိုးရှိသောနည်းစနစ်များဖြစ်ပါသည်။ အပိုင်း(၁)ကိုမတက်ပဲယခုအပိုင်းကိုတက်ရောက်လိုပါမူအနည်းဆုံးလုပ်သက် ၃ နှစ်စာရင်းကိုင်နယ်ပယ်တွင် Excel သုံးခဲ့ဖူးသူဖြစ်သင့်ပါသည်။ ထိုထက်အတွေ့အကြုံနည်းပါမူ အပိုင်း(၁)ကိုအယင်တက်သင့်ပါသည်။
ယခုအပိုင်းမှာ အပိုင်း(၁) အပိုင်း(၂) ကိုလုံး၀ပင်မသုံးမသိမြင်သော်လည်း အခြားဒေတာဘေ့စ်များ စာရင်းကိုင်ဆော့ဖ်ဝဲများ သို့မဟုတ် ပုံစံတကျရှိနေသော အိပ်က်ဇဲလ်ဒေတာတေဘယ်လ် ဒေတာဘေ့စ်များနှင့်ချိတ်ဆက်လျက် ဒေါင်လိုက်ဖြစ်စေ အလျားလိုက်ဖြစ်စေ လေ့လာဆန်းစစ်ဝေဖန်အကြံပြုရသူဝေဖန်ဆုံးဖြစ်ရသူမာန်နေဂျာများ အတွင် ဒေတာအချက်အလက်ကို မိမိမောက်စ်ဖျားမှအပိုင်သိမ်းပိုက် လေ့လာနိုင်သောနည်းစနစ်များဖြစ်ပါသည်။ Decision Support Tool ဖြစ်သောအသုံးများလူကြိုက်များ MNC ကြီးများတွင်မလွဲမသွေသုံးရ
မည့် ပိုက်ကွန်သဲ့နည်းစနစ် Pivot Table ကိုအနုစိတ်သင်ကြားပါသည်။ လုပ်သက်အနှစ် ၂၀ ကျော်တွင် ယခုသင်ပြသောနည်းစနစ်များ၏ ၂၅% ခန့်သာသုံးလျင်ပင်အလွန်ထိရောက်လှသည်ကိုတွေ့ခဲ့ရပြီး နည်းစနစ်တော်တော်များများမှာယခင်ကသိပ်သတိမထားမိသော အိပ်က်ဇဲလ်၏ လူသိပ်မသိသော မာန်နေဂျာအချို့သာသိသော နည်းစနစ်များ ဧ၀အကန်အမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
စာရင်းကိုင်ပညာနယ်ပယ်တွင် ပြည်တွင်းပြည်ပမည်သည့်နေရာမဆို အလွန်အသုံးတည့်သော သာမာန်အားဖြင့်ရက်လကြာမည့်အခက်အခဲများကို မိနစ်ပိုင်းနာရီပိုင်းအတွင်းတိကျသေခြာလွန်းစွာပြီးစီးနိုင်သောနည်းစနစ်များကိုစုစည်းထားသည်ဖြစ်ရာ မည်သည့်အလုပ်ခွင်မှာမဆို အထောက်အကူပြုသော မျက်နှာချစ်ဆေး မျက်နှာပန်းပွင့်ဆေးလည်းဖြစ်ပါသည်။
ပြည်ပသွားသင်လျင် ဒေါ်လာ ၃၅၀၀ မှ ၄၅၀၀ ခန့်မကုန်ပဲမရနိုင် စရိတ်တတ်နိုင်လျင်ပင် ဘာသာစကားကြောင့်ထင်သလောက်မရနိုင်သည်ဖြစ်ရာ ပြည်တွင်းတွင် ဒေါ်လာ ၁၀၀ကျော် မျှသောစရိတ်ဖြင့် အချိန်ရှိခိုက် အပင်ပမ်းခံကာမအားလပ်သည့်ကြားမှစနေတနင်္ဂနွေတွင်မနားပဲဖွင့်ပေးသောသင်တန်းများအားကြိုးစားတက်ရောက်ရန်တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
အွန်လိုင်းဖောင်ဖြည့်ထားရန်လိုပြီးသင်တန်းစရန် တပါတ်အလိုတွင် သင်တန်းကြေးသွင်းကျောင်းအပ်ရန်အကြောင်းကြားပေးပါသည်။
ကုမ္ပဏီ ကြီးများ MNC ကြီးများမှများစွာအားထားသင်တန်းသားဆယ်ရာချီကာ မိမိတို့ဝန်ထမ်းများကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့ကြသည် ဖြစ်ရာ သင်တန်းသား ၂၀ နှင့်အထက်အတွက်အထူးနှုန်း corporate discount ရှိပြီး ၂၀အောက်အတွက်ပုံမှန်နှုန်း ဖြင့်သီးခြား စီစဉ်ပေးပါသည်။
အပိုင်း ၁. အခြေခံမှအဆင့်မြင့်ဖန်ရှင်များ Fundamentals & Advanced Functions ၇၅၀၀၀ ကျပ်
အပိုင်း ၂. မော်ဒယ်လ်များတည်ဆောက်ခြင်းModelling & Financial Report
၁၂၀ ၀၀၀ ကျပ်
အပိုင်း ၃. ဒေတာဘေ့စ်နှင့်လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းပညာ
Databases, Tables, Reporting & Analysis ၇၅၀၀၀ ကျပ်
အစအဆုံးတက်သူများ ၂၀၀ ၀၀၀ ကျပ်ပါ။
62 Second Floor
Corner of 6th Street & Hledan Main Road